တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dr. Vivian Balakrishnan အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး H.E. Dr. Vivian Balakrishnan အား ယနေ့မွန်လွဲပိုင်းတွင် ဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရှည်ကြာစွာ ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများမှရွေးချယ်ထားသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းနေမှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိစီးပွားရေး အခြေအနေများ၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံအနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့်အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက် သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမှတစ်ဆင့် အာဆီယံနိုင်ငံ များအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည့်အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေး ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Robert Chua နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ စငျကာပူနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီး H.E. Dr. Vivian Balakrishnan အား ယနမှေ့နျလှဲပိုငျးတှငျ ဇယြောသီရိဗိမာနျရှိဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-စငျကာပူနှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးရှညျကွာစှာ ကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံပွညျသူမြားမှရှေးခယျြထားသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျလြှောကျလှမျးနမှေုနှငျ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံစီးပှားရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏လကျရှိစီးပှားရေး အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျ ပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ပွဿနာမြားကိုဖွရှေငျးရာတှငျ စငျကာပူနိုငျငံအနဖွေငျ့ တတျနိုငျသညျ့ဘကျမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျ့အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျ သမားမြား၏ တိုကျခိုကျမှုမြားဖွဈပှားခဲ့ပွီး အဆိုပါအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားမှတဈဆငျ့ အာဆီယံနိုငျငံ မြားအပျေါ ရိုကျခတျလာနိုငျသညျ့အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေး ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး စငျကာပူနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ စငျကာပူ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Robert Chua နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက စငျကာပူနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအား အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျခဲ့သညျ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0